Fanakorontana fiarahamonina - Ankaraobato :: Nakaton’ny fanjakana ny fiangonana “Vahao ny oloko” • AoRaha
Fanakorontana fiarahamonina – Ankaraobato Nakaton’ny fanjakana ny fiangonana “Vahao ny oloko”
Tsy nisy alaharo fa nakaton’ireo solontenam-panjakana ny fiangonana zandriny iray “Vahao ny oloko” ao amin’ny Samaf Ankadilalampotsy-Ankaraobato, afak’omaly. Didim-pitondrana avy amin’ny Prefektioran’ny Polisy eto an-drenivohitra no notanterahin’ireo olom-panjakana notarihin’ny lefitry ny “Préfet”.
“Manakorontana fiainam-bahoaka io fiangonana io”, hoy fotsiny ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, Préfet eto Antananarivo renivohitra sy ny faritra Analamanga, omaly mikasika ny antony nandraisany io fepetra io. “Mitabataba, na amin’ny antoandro na amin’ny alina. Betsaka ireo marary eo amin’ny manodidina no tsy milamin-tsaina vokatr’izany. Misy ny sekoly voakorontana. Tao anatin’ny roa taona izay no nametrahan’ireo mponina fitarainana. Nisy ny ala nenina nataonay ka nifampiresahana tamin’ireo mpitondra an’io fiangonana io saingy tsy nisy ny fandraisana andraikitra”, hoy hatrany itsy tompon’andraikitra itsy.
Tamin’ny alalan’ny didim-pitondrana laharana 109 MID/Pref.Pol/Ag navoakan’ny Prefektoran’Antananarivo, tamin’ny 4 septambra lasa teo, ity fanakatonana notanterahina ity. Niaraka tamin’ny vadintany ny lefitry ny Prefet-n’ny polisy, ny lefitry ny lehiben’ny distrikan’Atsimondrano, ny lefitry ny Ben’ny tanànan’Ankaraobato sy ireo mpitandro filaminana tamin’ny fampiharana ny didy tao amin’ilay fiangonana.
“Betsaka ny tranga toy izao any an’elankelan-trano any eto an-drenivohitra, izay manakotaba ny fiarahamonina saingy tsy misy mitaraina aty aminay ka mahazaka ny zava-misy angamba ireo mponina. Sady tsy vitan’ny manakotaba io fiangonana teny Ankaraobato io fa tsy manara-dalàna ihany koa. Tsy misy fahazoan-dalana momba ny fisiany akory aty aminay”, hoy hatrany ny jeneraly Ravelonarivo Angelo.
Na izany aza, nilaza io tompon’andraikitra io fa: “misy vaomiera manokana najoro iraisan’ireo izay voakasika tamin’ity tranga ity. Mandinika izay mety ho tohin’ny raharaha io vaomiera io. Raha toa ka manaraka ny fepetra napetraka sy manara-dalàna ilay fiangonana mba hialana amin’ny fanakorontana ny manodidina dia ho azo eritreretina ny hamerenana ny fisokafany indray”, hoy izy.
Fisolokiana tany Toamasina